Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Natural disasters everywhere သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ
မြန်မာပြည်မှာ နေရာအတော်များများ ရေကြီးနေသတဲ့။ ဘေးအန္တရာယ်ကနေ အမြန်လွတ်ကင်းကြပါစေ။
ကမ္ဘာမှာ ၂ဝ၁၂ အတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ၉ဝ၅ ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ အသင့်အတင့်သာဆိုးတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ ၉၃% က ရာသီဥတုနဲ့ဆိုင်တယ်။ ၄၅% က မိုးလေဝသနဲ့ဆိုင်တယ်။ ၃၆% က ရေကြီးတာနဲ့ဆိုင်တယ်။ ၁၂% က အပူလှိုင်း၊ အအေးလှိုင်း၊ မိုးခေါင်၊ တောမီးလောင်တာတွေနဲ့ ဆိုင်တယ်။ ၇% က ငလျင်၊ မီးတောင်ပေါက်တာတွေနဲ့ဆိုင်တယ်။
1. Volcanic eruptions မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်း၊ အေဒီ ၇၉ ခုနှစ်တုန်းက Mount Vesuvius ဗေဆူးဗီးယပ်စ် မီးတောင်ကြီး ပေါက်ကွဲတဲ့သမိုင်းကို ကနေ့အထိမမေ့နိုင်ကြပါ။ ဓါတ်ငွေ့တွေ၊ ကျောက်တုန်းကျောက်ခဲတွေ ပြာတွေ ချော်ရည်တွေဟာ ၃၃ ကီလိုမီတာ (၂၁ မိုင်) အမြင့်အထိတက်ခဲ့တယ်။ နှုန်းက ၁ စက္ကန့်မှာ ၁့၅ သန်းတန်ရှိတယ်။ ဟီရိုရှီးမားအနုမြူဗုံးထက် ထောင်ပေါင်းများစွာကြီးမားတယ်။ လူနေဒေသတွေ အများကြီးဖုံးလွှမ်းခံရလို့ အပြီးအပိုင်ပျောက်ကွယ်သွားစေတယ်။ Pompeii (ပွန်ပေ) မြို့ကြီးနဲ့ Herculaneum (ဟာကျူလေနမ်) တို့ကအထင်ရှားဆုံးတွေဖြစ်ကြတယ်။ ဘယ်လောက် သေဆုံးခဲ့သလဲ ခန့်မှန်းချက်သာ လုပ်လို့ရတယ်။ အဲဒီမြို့တွေက လူသေအစအန ၁၅ဝဝ သာရတယ်။
2. Avalanches and mudslides မြေပြို ရွံ့ပြိုလို့ ဥရောပတိုက် အဲလ်ပ်စ်တောင်တန်းမှာ ပဌမကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့လို့ စစ်သားပေါင်း ၄ သောင်းကနေ ၈ သောင်းအထိ သေဆုံးခဲ့ရတယ်။
3. Earthquakes မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ ၂၃-၁-၁၅၅၆ တရုပ်ပြည်ငလျင်ကြောင့် လူပေါင်း ၈ သိန်းကျော် သေဆုံးခဲ့တယ်။ ၂၈-၇-၁၉၇၆ တရုပ်ပြည်မှာပဲ ၂ သိန်းကနေ ၆ သန်းကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်။ ၂၇-၉-၁၂၉ဝတရုပ်ပြည်မှာပဲ လူပေါင်း ၁ သိန်း သေဆုံးခဲ့တယ်။ ၈-၁ဝ-၂ဝဝ၅ ကက်ရှမီးဒေသမှာ လူပေါင်း ၈ သောင်း ၆ ထောင်သေခဲ့တယ်။
4. Sinkholes မြေကြီးတွင်းဖြစ်ခြင်းဆိုတာ မိုင်းတူရာကနေဖြစ်တယ်။ ၂ဝ၁ဝ ဂွာတီမာလာမြို့တော်မှာ လူ ၁၅ ယောက် မြေမြိုခံရတယ်။ မုန်တိုင်းနဲ့မိုးသည်းလို့ဆက်ဖြစ်တယ်။
5. Floods ရေကြီးခြင်း၊ ၂ဝ၁ဝ တရုပ်ပြည်မှာ ရေကြီးလို့ လူပေါင်း ၂၃ဝ သန်းကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်။ ၂ဝ၁ဝ နိုဝင်္ဘာတုန်းက ကိုလမ်ဘီယာမှာ ရေကြီးလို့ လူပေါင်း ၁့၃ သန်းနေစရာမဲ့ဖြစ်ရတယ်။ မလေးရှားနဲ့ ထိုင်းမှာလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၂ဝ၁၁ တရုပ်ပြည်မှာ လူပေါင်း ၄့၈ သန်းကိုထိခိုက်စေပြီး ၅၄ ယောက် သေတယ်။
6. Limnic eruptions ဓါတ်ငွေပေါက်ထွက်လာခြင်းဆိုတာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓါတ်ငွေ့တွေ ရုတ်တရက် ရေတွေလို ပေါက်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။
7. Tsunami ဆူနာမီကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က အရှေ့- အရှေ့တောင်နဲ့ တောင်အာရှမှာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
8. Blizzards များလွန်းတဲ့နှင်းနဲ့ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းကို ၁၉၈၈ တုန်းက အမေရိကမှာနဲ့ ၂ဝဝ၈ တုန်းက အာရှမှာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
9. Cyclonic storms ဆိုက်ကလုန်း၊ အပူပိုင်းဆိုက်ကလုန်း၊ တိုက်ဖွန်း၊ ဟာရီကိန်း စတာတွေဖြစ်တယ်။
10. Extratropical cyclones အပူပိုင်းဒေသမဟုတ်တဲ့ ဆိုက်ကလုန်းတွေလည်းရှိတယ်။ ၁၉၅၃ မြောက်ပင်လယ်မှာဖြစ်ခဲ့လို့ ၂၂၅၁ ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်။
11. Droughts မိုးခေါင်ခြင်းကို ၁၉၉၇ နဲ့ ၂ဝဝ၉ ကြား သြစတေးလျမှာခံခဲ့ရတယ်။ ၂ဝ၁၁ တုန်းက တက်ဆပ်စ်မှာခံရတယ်။
12. Hailstorms ရေခဲမိုးကို ၁၉၈၄ ဂျာမဏီမှာခံရတယ်။
13. Heat waves အပူလှိုင်းရိုက်ခြင်းကို ၂ဝဝ၃ ဥရောပမှာခံရတယ်။ ၂ဝဝ၉ တုန်းက သြစတေးလျမှာ။
14. Tornadoes တိုနေးဒိုး လေဆင်နှာမောင်းဆိုတာ အများအားဖြင့် လေတိုက်နှုန်း ၁၁ဝ မိုင်ရှိတယ်။ ၂၅ဝ ပေမြင့်တယ်။ တနာရီ မိုင် ၃ဝဝ အထိလည်းရှိတယ်။
15. Wildfires တောမီးလောင်တာကို ၁၈၇၁ တုန်းက အမေရိကမှာ လူပေါင်း ၁၇ဝဝ ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်။ ၂ဝဝ၉ တုန်းက သြစတေးလျ။
Health disasters အပူဒဏ်သဘာဝဘေးများ၊ Epidemics ကပ်ရောဂါကျရောက်ခြင်း၊ Space disasters (Asteroids) ဥက္ကာခဲတွထိမှန်ခြင်းနဲ့ Solar flare နေမီးလောင်ခြင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
Disaster management အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း
ဘယ်နိုင်ငံမှ အဲလိုဘေးလွတ်တယ်ရယ်မရှိပါ။ အဓိက (၄) မျိုးရှိတယ်။
၁။ Natural disasters သဘာဝဘေးတွေထဲမှာ ရေကြီး၊ ဟာရိကိန်းမုန်တိုင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်း၊
၂။ Environmental emergencies ပတ်ဝန်းကျင် အရေးပေါ်အခြေအနေများထဲမှာ စက်ရုံတွေ၊ ခရီးသွားလာမှုတွေကနေ ဖြစ်စေတာတွေပါတယ်။
၃။ Complex emergencies ရှုတ်ထွေးတဲ့အရေးပေါ်အမျိုးအစားတွေဆိုတာ မင်းမဲ့အခြေအနေဖြစ်တာနဲ့ အရေးပါ ဗျူဟာကျတဲ့နေရာတွေကို တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေပါတယ်။
၄။ Pandemic emergencies ဆိုတာနေရာဒေသတခုမှာ ကွက်ပြီးကူစက်ရောဂါကျရောက်တာတွေပါတယ်။
ဘယ်လိုဘေးကနေမဆို စီးပွားရေး၊ သွားရေးလာရေး၊ ရေရရှိမှု၊ အညစ်အကြေးစွန်းခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ လူမှုရေးစတာတွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေတယ်။ ရေတို ရေရှည်သက်ရောက်မှုတွေခံကြရတယ်။ အဲတာကြောင့် ဒေသအလိုက်၊ နိုင်ငံအလိုက်နဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေလုပ်ထားပြီး နည်းလမ်းတွေ၊ ကယ်တယ်ရေးတွေ၊ ထောက်ပံ့ရေးတွေ ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီး ၂၄ နာရီမပြတ်အဆင်သင့်ရှိနေစစေရတယ်။
Disaster preparedness အဆင်သင့်ရှိစေရေး၊ Disaster relief အကူအညီပေးရေး၊ Disaster recovery ပြန်လည် ထူထောင်ရေးတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ Disaster management စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာ ဖွံဖြိုးမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။ သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေနဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ အမျိုးသမီးတွေက ဒဏ်အခံရဆုံးဖြစ်ကြတယ်။
Disaster prevention ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အလွန်အရေးကြီးတယ်။ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၈ နိုင်ငံကနေ သဘောတူညီချက်တခုချမှတ်ခဲ့တယ်။ ၁ဝ နှစ်စီမံကိန်းဖြစ်တယ်။ Hyogo Framework (ယိုဂို) အခြေခံလို့ ခေါ်တယ်။ ကုလသမဂ္ဂအစီအစဉ်နဲ့ ၁၉၉၉ တုန်းက International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR) စာအုပ် ထုတ်ထားတယ်။
ကမ္ဘာအဆိုးဝါးဆုံး သဘောဝဘေးတွေ (၂၅) ခုစာရင်းရှိတယ်။
9. 1970 = Bhola Cyclone ဘင်္ဂလာဒက်ရှ် ဆိုက်ကလုန်
မြန်မာပြည်မှာ ဘေးအန္တရာယ်ကနေ အမြန်လွတ်ကင်းကြပါစေ။
ပုံတွေကို ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေယူပါတယ်။ ကျေးဇူး။